Nye Visas e-Tourist na India Ugbu a na-agba Onye Ndú IATO gara aga ume
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Nye Visas e-Tourist na India Ugbu a na-agba Onye Ndú IATO gara aga ume
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
e-njem nleta Visas
Onye ndu njem na njem nlegharị anya Subhash Goyal, Onye isi oche nke otu STIC na onye isi oche mbụ nke Association nke Ndị Ọrụ Njem Nleta (IATO), kwuru na mba ahụ kwesịrị ịmalite ozugbo ịhapụ e-Tourist Visas na India ma hazie ụgbọ elu mba ofesi na ọnwa Septemba na October ka ịmalite iweghachi mpaghara ahụ.
COVID ga-anọ, anyị ga-amụtakwa ibi na ya, ka Goyal na-ekwu.
Imirikiti ndị njem India na-abịa n'etiti Ọktoba na Machị, yabụ, oge a na-abịa dị ezigbo mkpa.
Ọtụtụ puku ndị ọrụ njem na ndị ọrụ njegharị agafeelarị ọghọm. Naanị olile anya maka ịlanarị bụ mbido visa e-njem na njem ụgbọ elu mba ofesi.
Goyal gara n'ihu ịsị:
Anyị ga-emezu nrọ nke Mịnịsta Ala na-eme ka India bụrụ ijeri dolla 5. Njem nleta bụ naanị ụlọ ọrụ nke na-arụsi ọrụ ike ma nwee mmụba na akụ na ụba. N’ihi ya, anyị kwesịrị ime ihe ugbu a tupu oge agaa.
Oge njem nleta maka India sitere na Ọktọba ruo Machị na anyị ekwesịghị ida a ohere n'afọ 2021 kemgbe afọ 2020 bụ mkpokọta asachapụ.
Na 2019, India nwetara Rs.2,10,981 crores Foreign Exchange site na oge Jenụwarị ruo Disemba ma ọ bụ US $ 3.1 na ọnwa nke ọnwa Disemba 2019 (isi MOT). Obodo ahụ natara ihe karịrị nde mmadụ 10 na njem nleta na 2019.
Njem nlegharị anya mba ụwa nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 10 nke GDP nke India na ihe dịka pasent 11 nke ụtụ na ụtụ isi. Ile ọbịa na ndị njem na-ewe ihe dị ka nde mmadụ 58 na ihe dị ka nde mmadụ 75 na-enweghị isi na India. Ihe dị ka nde mmadụ 10 enwekwaghị ọrụ ma ọ bụ nọrọ na ezumike na-akwụghị ụgwọ.